Arsenal Oo West Brom Ka Reebtay Premier League-ga – Garsoore Sports
Arsenal Oo West…
Arsenal ayaa goolal 3:1 ah uga adkaatay kooxda West Brom iyadoo xiddigaha Willian iyo Pepe ay wacdaro dhigeen kulankii ka qabsoomay garoonka Emirates.
Kooxda Kubbad-cagta ee Westbromwich Albion ayaana u dhaadhacday heerka 2aad ee horyaalka Premier League-ga kaddib guuldarradan soo gaartay.
Kooxda Arsenal ayaa ku hormartay goolka koowaad ee kulanka kaddib markii uu koroos quruxbadan soo dhigay shabaqa da’yarka kooxda ee Bukayo Saka iyadoo da’yarka kale ee Emile Smith-Rowe uu shabaqa ku garaacay kubbad joog hooseeysay.
Nicolas Pepe ayaa wacdaro kulankan dhigay isagoo bandhig qurux badan ku suntay gool uu ka laaday meel goosha xoogaa ka yara baxsan isagoo shabaqa la helay laadkiisii dheeraa.
Kooxda u dhaadhacday heerka 2aad ee West brom ayaa wax xoogaa rajo ah uu soo yara galay kaddib markii uu cayaaryahan Pereira u dhaliyay goolkooda raja siinta markii ay cayaarta ka harsanayd 23 daqiiqo.
Hayeeshee dhammaadkii cayaarta ayay gunners markale shabaqa soo taabteen kaddib markii uu Willian u dhaliyay gool laad-xor ahaa oo uu ka laaday meel wax yar ka shisheeysay sanduuqa rigoorada markaasoo uu xiddigan reer Baraaziil shabaqa dhex dhigay goolkiisii ugu horreeyay ee Premier League ee kooxda Arsenal.
Gunners xilli-cayaareedkan uma muuqdaan kuwo usoo bixi kara cayaaraha tartamada Yurub ololaha xiga iyadoo taageerayaasha Gunners ay banaabaxyada ‘KroenkeOut’ sameeyeen cayaarta kahor si ay u muujiyeen qanacsanaan l’aanta ay ku qabaan milkiilaha kooxda.
Kooxda laga adkaaday kulankan ee West Brom ayaa u dhaadhacaysa heerka 2aad ee horyaalada Ingiriiska iyadoo macalinkooda Sam Allardayce uu wajahayo rikoorkiisii ahaa in marnaba uusan u dhaadhici heerka 2aad isagoo macalin ah.
Real Madrid Oo Fursad Dahabi Ah Iska Lumisay Iyadoo Barbarro Fakasho Ah La Gashay Kooxda Sevilla